Izinkinga nge-thyroid. Izimpawu zesifo kanye nezindlela zokwelapha
Abambalwa bethu bayazi okuningi ngenduku ye - thyroid kuze kube yilapho ibhekene nesifo sayo. Kusuka emzimbeni omncane kangaka onikeziwe ohlelweni lwe-endocrine, imisebenzi eminingi yomzimba wethu incike.
Ngokuvamile kwenzeka ukuthi kunezinkinga nge- thyroid, izimpawu azibonakali ngokushesha. Kuvela ukuthi lesi sifo sibonakala kakhulu kunokuba sibonakale sithinta ukubonakala kwethu futhi sithinte impilo yethu.
Izinkinga nge-gland yegciwane zithinta kabi zonke izinhlelo zezinhlaka emzimbeni womuntu. Ngaphezu kwalokho, banda ingozi yokubonakaliswa kwezinye izifo ezinzima futhi ezingathinteki.
Izimpawu zezinkinga ezine-thyroid zihluke kakhulu. Lo mzimba uziphatha ngokungahambi kahle, ngoba izimpawu eziningi zingase zibonise ukukhathala okuvamile, kodwa empeleni konke kunzima nakakhulu. Izimbangela zesifo segciwane kungase kube ukuntuleka kokulala, ukuzivikela emzimbeni omncane, imikhuba emibi, izimo ezicindezela njalo, futhi okubaluleke kakhulu, ukuntuleka kwe-iodine emzimbeni. Lezi zifo zingazuzwa njengefa. Ngokuvamile izinkinga zegciwane le-thyroid zikhona kubantu besifazane, umzimba wabo ungengozi ngenxa yokushintsha kwama-hormone njalo.
Ukuze unqume ukuthi kukhona yini ukukhubazeka emzimbeni womzimba, udinga ukubheka ngokwakho noma uhlolwe njalo kwezokwelapha. Uma unenkinga nge-thyroid, izimpawu zikhuluma ngokwabo. Okokuqala, ukukhathala kanye nesimo sezinzwa njalo, ukulahlekelwa izinwele kanye nokushintsha esikhumbeni, ukwehla ngokushesha noma ukutholakala kwesisindo, kanye nokwehluleka kwezipikili nobuthakathaka emisipha. Lezi zimpawu kufanele zikhokhwe esigabeni sokuqala sesifo. Kamuva, isimo sempilo sibuhlungu kanye nokuqhubeka kwesifo, okuba nzima kakhulu futhi kunzima ukuphatha.
Isikhumba siphunduka futhi somile, inkulumo iyancipha futhi ukwanda ngolimi kubonakala, ukulala okuphakade nokukhungatheka kwesimiso sezinzwa kubonakala, umsebenzi wenhliziyo uphazamiseka, inkumbulo iyawohloka futhi inganaki iyabonakala. Ukubonakaliswa kwezibonakaliso ezinjalo sekuyisibonakaliso esivelele sokuthi kuyadingeka ukuthi kudingeke ukuba uye ku-endocrinologist bese uhlola.
Uma isimo sempilo sibonisa ukuthi kunezinkinga nge-thyroid, izimpawu ziqala ukuvela kaningi, kukhona ukuphuza noma ukusheshisa kwe-metabolism emzimbeni, kuyadingeka ukuba ufunde ukwelashwa, okuvame ukuhambisana nokutholwa kwezidakamizwa eziphikisayo ezivame ukuphazamiseka kwezimo ze-hormone noma ngokungenelela okuhlinzayo. Ngesinye isikhathi imithi kufanele isetshenziswe kuzo zonke izimpilo zabo. Uma ungaqapheli izinkinga ze-thyroid ngesikhathi, izimpawu zazo kulula ukubona, ungase udinge ukwelapha i-hypothyroidism noma i-hyperthyroidism esikhathini esizayo. Lokhu kungaholela ekukhuphukeni okusheshayo kwe-cholesterol egazini, amathambo aphefumulayo, kanye nengozi yokuhlaselwa yinhliziyo, ukushaya isifo noma ukuthuthukiswa komdlavuza wegciwane.
Iyini i-gonorrhea futhi yimuphi ingozi yayo?
Isisu esisemthonjeni yokubeletha: izimpawu, izimbangela, ukwelashwa
Isikhumba njengesibonakaliso. Ukuvuvukala kwamaphaphu noma umkhuhlane ovamile?
Ibambezelekile zokukhuluma ezinganeni: Izimbangela Nezingozi uphethwe
Yini ukukhetha njengesipho umfana ukuba nobuhlobo obungathi ngonyaka?
SNK - uhlaka amandla Soviet
Analogue Russian kanye angaphandle "Erythromycin": incazelo, amanani, ukubuyekezwa. Yini esikhundleni imikhiqizo esekelwe erythromycin?
Amandla amaVeda. Ukudla okunomsoco for impilo nokuphila kade
I-Carbuncle: ukwelashwa kudingekile kuphela